Fa’iidooyinka Quraacda Subaxa – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Fa’iidooyinka Quraacda Subaxa
Daraasada cilmi baadhis ah oo ay soo saartay Harvard School of Public Health (HSPH) ayaa cadaysay in quraacada subaxii ay muhiim u tahay caafimaadka qofka, isla markaana ay leedahay faa’iido iyo waxtar weyn.
Cilmi baadhistaan oo lagu shaaciyay Wargeyska American Heart Association, ayaa socotay mudada 15 sano ah iyadoo ragga laga qaaday tiradooda lagu qiyaasay 26,902 , oo ah kuwa ka sheqeeya goobaha caafimaadka, da’doodun waxay u dhaxaysay 45-82. Iyadoo 1572 Ragaasi ka mid ahi ay ka cabanayaan xanuunada wadnaga.
Ragga quraacad ka taga waa raga aan xaasaska lahayn, kuwaasi oo isticmaala sigaarka ama khamriga ka hor quraacada.
Previous articleShidaalka Somalida iyo Xaraashka Maanta. khatar.
Next articleFaa’iidada Midhaha Romanka, Liinta Iyo Tufaaxa!
Warbixintii ugu danbeysay itoobiya Covid19 iyo 3 qof oo jooga Jigjiga